Girazi Perfume Bhodhoro
Kubudirira uye mashandiro e lavender yakakosha mafuta
Mafuta akakosha chinhu chakakosha muhupenyu hwevakadzi hwezuva nezuva. Mafuta akakosha chigadzirwa chakakurumbira kwazvo chevakadzi. Iwo mashiripiti mhedzisiro ye lavender yakakosha mafuta kune acne kudhinda inogamuchirwa nevakadzi vazhinji vakanaka. Kubudirira kwe lavender yakakosha mafuta: 1. Nyaradza, bvisa marwadzo uye udzikise ...
Mhando uye mashandiro emafuta akakosha
Mafuta akakosha chinhu chinonhuwirira chinotorwa kubva pamaruva, mashizha, madzinde, midzi kana michero yemiti yemusango. Vanhu vanoshandisa akakosha matekiniki, senge meridian poindi masaja kana kufema kwakadzika, kuunza yakakosha mafuta mumuviri wemunhu, uyo unonzi "aromatherapy". Mhando nhatu dze ...
Nzira yekusarudza yakakosha mafuta?
Nzira yekusarudza yakakosha mafuta? Mafuta akakosha akadhirowa akachena akachenurwa kubva pamichero, makanda, nhungirwa, mashizha kana maruva emiti. Ivo anoshandiswa ku aromatherapy kukurudzira manzwiro uye hutano hwepanyama. Mafuta akakosha anogona kuzorwa mumuviri nemvura kana mafuta epasi anotakura, inhaled ne ...
Unoziva here iwe chaunofanirwa kutarisisa kana uchishandisa chipikiri chechipikiri?
Unoziva here iwe chaunofanirwa kutarisisa kana uchishandisa chipikiri chechipikiri? Kana zvasvika kune manicure, isu tinofunga nezve iyo yakajeka, inopenya nzara mafuta.Asi uyu mudiki bhodhoro muviri, zvakare senge ruvara uye chitarisiko, pane chakavanzika chikuru, nhasi kugovana zvimwe zvekushandisa kwembambo mafuta zvimwe zvidiki zvakajairika se. ..
Nzira yekusarudza pefiyumu yekufambidzana?
Nzira yekusarudza pefiyumu yekufambidzana? Munguva yezuva, ingave yehunyanzvi kana yemunhu, zvakakosha kuratidza mufananidzo wechokwadi, zvinoenderana nechako chechokwadi. Kana yakanyatsosarudzwa, pefiyumu yako inoenderana nehunhu hwako, uye inogona kusiya fungidziro yekusingaperi pazuva rako, uyo asingazorangarire ...
Maitiro ekuvandudza epasi rose musika wemugove wemafuta ekurongedza mabhodhoro
Parizvino, kunyangwe musika wepefiyumu wepamba uri kukura nekukurumidza, asi mupasi rose pefiyumu mashandisirwo emari yeiyo chikamu hachina kukwirira Zvisinei hazvo, China yazvino Chinese pefiyumu bhodhoro yekupakata mupasi rave rimwe kana maviri. Pamusoro pevamwe zvakanyanya kwazvo -end zvigadzirwa zvepamusoro, dome ...
Maitiro ekushongedza mabhodhoro ewaini
Muhupenyu, isu tichaona kuti zviri nyore kuburitsa zvinhu zvakawanda zvisina basa, mune akawanda mabhodhoro ewaini asina chinhu akajairika. Vanhu vazhinji vanosarudza kurasa aya mabhodhoro ewaini asina chinhu, asi chaizvo, mushure mekushandura aya mabhodhoro ewaini asina chinhu, anogona kuve akashongedzwa akanaka kwazvo. 1. Waini bot ...
Nzira yekubvisa sei chipikiri chechipikiri?
Chipikiri chipikiri chishongedzo chinoshandiswa kugadzirisa uye kuwedzera kuoneka kwembambo. Inogona kuumba firimu rakatetepa pamusoro pezvipikiri. Chipikiri polishi hazvisi nyore kuchenesa. Kubvisa chembambo chipikiri kunogona kurwadza zvakanyanya, kunyanya kana uine akati wandei matete kuti ubvise. Chipikiri polish inozopedzisira ...
Maitiro Ekuchengetedza Perfume
Perfume inogona kuoneka kwese kwese muhupenyu hwedu hwezuva nezuva. Inogona kuonekwa kana mutafura yekupfeka kana muchimbuzi. Saka zvemafuta, chinofanira kuchengetedzwa sei? Mapefiyumu kazhinji haana kunyorwa nemazuva ekupera, asi haana kugadzirirwa kupa kushandiswa kwenguva refu. Kunhuwirira kwepefiyumu kuchaita st ...
Nzira yekusarudza pefiyumu yechando
Nzira yekusarudza pefiyumu yechando Tsvaga pefiyumu yechando yakafanana neyeimwe nguva dzegore. Unofanirwa kutsvaga chimwe chinhu chaunoda uye ungade kuve nemaawa mashoma paganda rako. Zvisinei, zvakanaka kuva nekuravira kunorema munguva yechando. Zvinonhuwira zvinonhuwira, hwema hwekunhuhwirira uye gourmands ari ...
Gadzira yako yakakwana yekuzora yekupaka
Nekukosha kwenzvimbo yerunako, cosmetic package bhokisi rave chinhu chakakosha pakusarudza yakakodzera kurongedza dhizaini mukushandisa uye mukushandisa. Saka maitiro ekugadzira iro rinotaridzika-rekushongedza bhokisi rekurongedza? Chinhu chekutanga chauchazofanira kuita kana uchigadzira yako yekuisa iset yako dhizaini e ...
Chengetedzo yekushandisa yakakosha mafuta
Chii chakakosha mafuta? Izvo zvinoumbwa nezvikamu zvezvimwe zvinomera, zvakaita semashizha, mahebhu, bark uye peel. Vagadziri vanoshandisa nzira dzakasiyana kuti vadzikamise mumafuta. Unogona kuvawedzera kumafuta emiriwo, kirimu kana gel rekugezera. Kana iwe unogona kunhuwidza, kukwiza paganda rako, kana kuisa mubhavhu. Vamwe ...